September 2020 - Page 10 of 18 - Amawpyay
“လူချစ်လူခင်များစေတဲ့ အလေ့အကျင့် ၁ ခု”
“လူချစ်လူခင်များစေတဲ့ အလေ့အကျင့် ၁ ခု” ၁။ အဆိုတော်တစ်ယောက် အဲဒီအဆိုတော်က အခွေမထွက်တာ ၅ နှစ်လောက် ရှိပြီ။ ပုံမှန်အားဖြင့် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဟာ အဲ့ဒီလောက် ပရိသတ်နဲ့ အဆက်ပြတ် သွားရင် တော်တော်လေး မြုပ်သလောက် ဖြစ်သွားပြီလို့ ပြောလို့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ ပိုပိုပြီးတောင် အောင်မြင်နေသေးတယ်။ အဓိက ကတော့ Social media ပေါ်မှာ အထင်အရှား မြင်နေ ရတဲ့ သူ့ရဲ့ PR skill ကြောင့်ပဲ။ ကျွန်တော့်သင်တန်းတစ်ခုမှာ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာမတစ်ယောက် လာတက်တယ်။ နားချိန်ရောက်တော့ အဲဒီ အစ်မက စကား လာပြော တယ်။ ကျွန်တော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် …
နေထိုင်စားသောက်ရေး ကိစ္စ အဝဝကို အကုန်ကျ ခံပေးသွား မည်ဟု ဦးဇော်ဇော် မှပြော
နေထိုင်စားသောက်ရေး ကိစ္စ အဝဝကို အကုန်ကျ ခံပေးသွား မည်ဟု ဦးဇော်ဇော် မှပြော ကိုဗစ်-၁၉ ဒုတိယ လှိုင်းမှာ လူနာတွေ များပြား လာတာကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပြီး ယာယီ Quarantine Center တစ်ခုကို သုဝဏ္ဏ မြက်ခင်းတု အားကစားကွင်းမှာ (၅)ရက်အတွင်း အပြီး တည်ဆောက် လျက်ရှိ ပါတယ်။ ပထမအဆင့် အနေနဲ့ လူ(၂၀၀)ထားရှိနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး လူဦးရေ (၄၀၀) အထိ တိုးချဲ့ထား ရှိနိုင်ဖို့ ကိုလည်း အစီအစဉ် ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ကုသရေးကိစ္စ အဝဝကို ကျန်းမာရေးနှင့် …
နောက်တစ်ယောက်ရှာတွေ့လို့ စွန့်ပစ်ခံ လိုက်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဖတ်ဖို့
နောက်တစ်ယောက်ရှာတွေ့လို့ စွန့်ပစ်ခံ လိုက်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဖတ်ဖို့ ချစ်သူက လောလောလတ်လတ် စွန့်ပစ် သွားတဲ့ အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်နေရသလား ? ဒါမှမဟုတ် ပြီးခဲ့တဲ့ အတိတ်က စွန့်ပစ်သွားတဲ့ ချစ်သူကို စိတ်မကုန်သေးဘူးလား ? နောက်တစ်ယောက်တွေ့လို့ သင့်ကို ထား သွားတာလား ? အဲဒီလို အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် အန်တီမေက အောက်ပါ အတိုင်း အကြံပြု ချင်ပါတယ်။ (၁) သင့်ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး ချစ်သူက သင့်ကို စွန့်ပစ် သွားတယ် ဆိုရင် သင့်မှာ အပြစ်ရှိလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ သစ္စာမတည်မြဲခြင်းရဲ့ သက်ရောက်မှု ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီအတွက် …
မျက်နှာဝင်းပ ၀က်ခြံကင်းကြစေဖို့ မျက်နှာမှာ အမာရွတ်တွေ ၊အစက်အပျောက်တွေကြောင့် စိတ်ညစ် ရတယ်လို့ ကလေးမလေးတစ်ဦးက ဆိုလာ ပါတယ်။ မျက်နှာချောမွေ့ကြည်စင်ဖို့ ဆေးနည်းလေးတွေ ရှိရင် လိုချင်ကြောင်းပြော လာပါတယ်။ အဆီအဆိမ့်အစားများတာ၊ အိပ်ရေးမ၀တာ ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများတာ ၊ အငံအစားများတာ တွေကြောင့် မျက်နှာမှာ ၀က်ခြံ ထွက်လာ ပါတယ်။ အစားအသောက်ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီအောင်သမမျှတစွာစားဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ ၀က်ခြံ၊ တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်တွေ ထွက်လာပြီဆိုရင် အလှပျက်မှာစိုးလို့ ထုံးနဲ့တို့တာတို့၊ တမာရိုးနဲ့ထိုးတာတို့ ဟာ အရေပြားကို ပျက်ဆီးစေတဲ့ အပြင် အမာရွတ်တွေပါ တိုးပွားစေပါတယ်။ ၀က်ခြံဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ အမာရွတ်တွေ ကကိုတော့ နနွင်းလက်ဖက် …
အိမ်ထောင်သက် ၁၅ နှစ်အကြာမှာ ခင်ပွန်းက gay ဖြစ်ပြီး ဇနီးသည်က lesbian ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ စုံတွဲ
အိမ်ထောင်သက် ၁၅ နှစ်အကြာမှာ ခင်ပွန်းက gay ဖြစ်ပြီး ဇနီးသည်က lesbian ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ စုံတွဲ လက်ထပ်ပြီး ၁၅ နှစ်အကြာ၊ သားသမီးနှစ်ယောက် ရပြီးတော့မှ ယောကျာ်းနဲ့မိန်းမ နေရာလွဲ သွားကြတဲ့ စုံတွဲမျိုး ကြားဖူးကြ ပါသလား။ အဲဒီလို ထူးခြားတဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုး တကယ် ရှိပါတယ်နော်။ ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူက ယောကျာ်းလျာဖြစ် သွားသလို ခင်ပွန်းသည်ကတော့ gay တစ်ဦးအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲ သွားခဲ့တာပါ သူတို့ကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အာရီဇိုးနားပြည်နယ်၊ Phoenix မှာနေထိုင်တဲ့ ဆရာနဲ့ဆရာမအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံပါ။ အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် Jenni Barrett ဟာ …
ကိုဗစ်ကာလမှာလည်း အချစ်တွေမလျော့ကြစေဖို့ ကိုဗစ်ဒုတိယ လှိုင်းကြောင့် အပြင်သွားလာ ခွင့်တွေ ကန့်သတ် ပိတ်ပင် လိုက်တဲ့ အတွက် ချစ်သူ စုံတွဲများ အနေနဲ့လည်း အရင်လို အလွယ်တကူတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ ခက်ခဲ လာနိုင်ပါတယ် ။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖိအားတွေ ရှိနိုင်တာ၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လည်း သိပ်မတွေ့ရတာ၊ ကိုဗစ်ကိုလည်း ပူပန်နေ ရတာ စသည်ဖြင့် တခြားသော စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေကလည်း ကြုံရနိုင်တဲ့ အတွက် ခုချိန်မှာ လူအများစုက သာမန်ထက် စိတ်တို စိတ်ဆတ်နေ တာမျိုးရှိ နိုင်ပါ တယ် ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရင်းနှီးဆုံးလို့ပြော ရမယ့် ချစ်သူ စုံတွဲတွေ ကြားမှာလည်း သာမန်ထက် ပိုတဲ့ …
မတော် တဆ ကွာရန်တင်း ဝင်ရလျှင် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားသင့်သည်များ
မတော် တဆ ကွာရန်တင်း ဝင်ရလျှင် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထားသင့်သည်များ ( ဘာပဲပြောပြော ပေါ့လေ ) အကြမ်းဖျဉ်း အနေနဲ့ ပေါ့ပေါးပါးပါး အဝတ် ၇ စုံခန့် မျက်နှာသုတ်ပဝါ ရေချိုးတဘက်။ စောင်ပါး တစ်ထည်။ အဝတ်အ စား ဟောင်း တစ်ထည် (ဟိုသုတ်ဒီသုတ် လုပ်ဖို့)။ အင်္ကျီချိတ် ၅ချောင်၊ လက်ဆေးဆပ်ပြာ အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာ၊ ရေချိုးဆပ်ပြာ၊ ခေါင်းလျှော်ရည် သွားတိုက်ဆေး၊ သွားတိုက်တံ။ ဖိနပ် အကြမ်းစီး၊ သုံးမိနစ်အိုး တစ်လုံ၊ Hair Dryer၊ မီးအိမ် ဓာတ် မီ၊ ခြင်ရိုက်ဘက်တံ၊ ပန်းကန် ၁ လုံး၊ ရေခွက် ၂ ခွက် …
နံနက်ခင်း အိပ်ယာထပြီးနောက် မျက်နှာသစ်တိုင်း နေ့စဉ် ရွတ်ဖတ် ရမည့် မျက်နှာသစ်ရာ ရွတ်ကြပါ
နံနက်ခင်း အိပ်ယာထပြီးနောက် မျက်နှာသစ်တိုင်း နေ့စဉ် ရွတ်ဖတ် ရမည့် မျက်နှာသစ်ရာ ရွတ်ကြပါ မျက်နှာ သစ်ရာ ရွတ်ကြပါ။ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဒုတိယမ္မိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဒုတိယမ္မိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဒုတိယမ္မိ သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ တတိယမ္မိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ တတိယမ္မိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ တတိယမ္မိ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သရဏဂုံတင် ပြီးပါက မိမိချစ်သူခင်သူ များကို မေတ္တာပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်အား မွေးထုတ်ပေး …
စနေသားသမီးများအတွက် တသက်စာ အဆောင်
စနေသားသမီးများအတွက် တသက်စာ အဆောင် စနေသားသမီးများအတွက် တသက်စာ အသက်ကာလ အရ အချိန်ကာလ တိကျစွာ ပြုလုပ်၍ လက်တွေ့ အကျိုးထူးစေမည့် နည်းလမ်း စနေဂြိုလ် သက်ရောက် ကာလ များဖြစ်သော အသက် (၁ ၉ ၁၇ ၂၅ ၃၃. ၄၁ ၄၉ ၅၇ ၆၅ ၇၃ ၈၁ ၈၉ ၉၇ )နှစ် များတွင် နေ့စဉ် နံနက် နေထွက်ချိန် မှ နံနက် ၈ နာရီ ၂၀ မိနစ် အတွင်း မိမိအဆင်ပြေသော ချိန်တွင် ၁။(သောရီ အရဟံ ဘဂဝါ သဗ္ဗလာဘံ ဘယံ …